AFG Caravelle Help biko
ajụjụ AFG Caravelle Help biko
1 afọ 10 ọnwa gara aga - 1 afọ 10 ọnwa gara aga #568 by calypso999
M hụrụ n'anya, na-efe efe na AFG Caravelle na FS9.
M wee gafee gị na saịtị na ntupọ nke Caravelle. Ọ baghị uru ikwu, m ebudatara ya na arụnyere na FSX Steam ebe m nwere ọtụtụ ihe mgbagwoju ugbo elu (pt Tu-154B2, DC-9, wdg).
Nwụnye gara nke ọma na m na n'oge na-adịghị nwere na ndị agadi maara Caravelle panel kwajuru.
Ihu ọma abụọ nsogbu ezie na.
Engines jụ amalite were were. Ha ga-eru a na-RPM na mgbe m na-emeghe mmalite valves na revs nnọọ anọ ebe ahụ. Ọ dịghị mmalite.
M nwere ike ghara inwe m flaps na-arụ ọrụ. Ọ dịghị ije na flaps nlele na dịghị ije nke flaps onwe ha.
M ga-n'ezie ekele maka enyemaka ọ bụla / aro.
Na-ele ka a panel / nlele nsogbu m. Onye ọ bụla ọzọ na Steam na-enwe otu ahụmahụ please25?
Ntọala ikpeazụ: 1 afọ 10 ọnwa gara aga calypso999.
Oge ike page: 0.168 sekọnd